प्रचण्डमाथि ओलीले देखाएको हार्दिकता, बठ्याईं मात्र हो - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
प्रचण्डमाथि ओलीले देखाएको हार्दिकता, बठ्याईं मात्र हो
Posted by Headline Nepal | ८ कार्तिक २०७४, बुधबार १८:४२ |
– डा. सुरेन्द्र झा/सह–महामन्त्री राजपा नेपाल
अहिले नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र भईरहेको छ । भन्न त भनिन्छ वाम गठबन्धनका कारण लोकतन्त्रलाई खतरा छ, राज्यलाई खतरा छ । तर साँच्चै भन्ने हो भने लोकतन्त्र र राज्यलाई कुनै खतरा छैन । खतरा छ त केवल सत्तालाई खतरा छ । अहिले हेर्ने हो भने प्रचण्डले गठबन्धनमा आईसकेपछि नैतिकताका आधारमा सरकारबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । केपी ओलीले नि जुन हार्दिकता देखाई रहनुभएको छ माओवादीमाथि, त्यो हार्दिकता नभई बठ्याँई मात्र हो , उनीहरुलाई जसरी हो सत्तामा आउनु छ, त्यसैकारण यो सब गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि केही खतरा छैन । उहाँसँग पूर्णरुपमा बहुमत छ । उहाँले चाहेअनुरुप काम गर्न पाउनुभएको छ । उहाँले चालेका कदम मलाई सकारात्मक लागेका छन् । हामी सत्ताको खेलमा छैनौं, हामी त्यसैले चुप बसिरहेका छौं ।
बाम गठबन्धनले लोकतन्त्रमा चुनौती खडा भएको छ । वाम गठबन्धन अप्राकृतिक गठबन्धन हो । देश बाहिरका शक्तिहरुको कारण उहाँहरुवीच यो गठबन्धन भएको हो । तर उहाँहरु मिलेर जाँदा आपत्ति छैन । तर उहाँहरुको एउटा पार्टी चाहिँ साम्यवादको लागि छ भने अर्को लोकतन्त्रका निम्ति काम गरेको पार्टी एमाले हो । फरक विचारधारा बोकेका ति पार्टीहरुले भित्तामा पुराना कम्युनिष्ट नेताहरुको फोटो टाँस्दैमा विचार मिल्ने हैन । उहाँहरुको एकता भएपछि उहाँहरुले भने, अब हामी साम्यवाद ल्याउछौं, यसो हुँदा लोकतन्त्रमा त यसै नै खतरा आईहाल्यो । हुन त नेपालमा कम्युनिष्टहरु मिल्नै सक्दैनन् । भागबण्डाका लागि मिल्न खोज्छन् र नमिलेपछि बाहिरिन्छन् ।
त्यसैले हामी त्यति चिन्तित त छैनौं । तर उहाँहरुको उदेश्य जुन छ त्यो उदेश्य सहि हैन । सत्तामा जाने उहाँहरुको पहिलो उदेश्य हो, भने अर्को भनेको जनतालाई रुमल्याउने काम गर्छन् । हामी लोकतान्त्रिक पार्टीलाई के थाहा छ भने रातारात वाम गठबन्धन हुनुमा देशविदेशका शक्तिहरुको चलखेल भएको छ । त्यसैले हामी लोकतान्त्रिक शक्तिहरु सचेत हुनैपर्छ । एकठाउँमा आउनै पर्छ । हामी मिलेर नै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने, र समाजवादलाई कसरी स्थापीत गर्ने भन्नेतर्फ हामी सचेत हुनैपर्छ ।
गठबन्धनमा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का आउनुहुँदैन । अनुहार हेरेर गठबन्धन गरिँदैन । यदि अनुहार हेरेर नै नेपाली काँग्रेससँग सहकार्य गर्ने हो भने नेपाली काँग्रेससँग हामीले सहकार्य गर्दैनथ्यौँ । किनभने, नेपाली काँग्रेस मधेशकै काखमा बसेर मधेशीलाई नै घात गर्ने पार्टी हो यसमा कुनै शङ्का नै छैन ।
वाध्यात्मक परिस्थितीका कारण लोकतान्त्रिक शक्ति एक हुन आवस्यक
हामी पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणका लागि लागिरहेका छौं । लोकतान्त्रिक पार्टीहरुको विस्तारै छलफल, सम्वादमा लागि परेका छौं । निर्वाचनको कुरा गर्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम एउटा शक्ति हो । नेपाली काँग्रेस मुलुककै पुरानो राजनैतिक शक्ति हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अगुवाई नेपाली काँग्रेसले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको भनाई थियो । हामीले सबै जिम्मेवारी बाँडफाँडका लागि कार्यदलहरु निर्माण भईसकेका छन् । गठबन्धनका लागि हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं ।
वाध्यात्मक परिस्थितीका कारण हामी एक ठाउँमा आउनु आवस्यक छ। सैद्धान्तिक हिसाबले नेपाली काँग्रेससँग हाम्रो सिद्धान्त मिल्दछ । गठबन्धनमा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का आउनुहुँदैन । अनुहार हेरेर गठबन्धन गरिँदैन । यदि अनुहार हेरेर नै नेपाली काँग्रेससँग सहकार्य गर्ने हो भने नेपाली काँग्रेससँग हामीले सहकार्य गर्दैनथ्यौँ । किनभने, नेपाली काँग्रेस मधेशकै काखमा बसेर मधेशीलाई नै घात गर्ने पार्टी हो यसमा कुनै शङ्का नै छैन ।
अर्को कुरा, हिजोसम्म मधेशको आफ्नो शक्ति थिएन तर आज राजपा, संघिय समाजवादी फोरम जस्ता आफ्नै शक्तिहरु मधेशसँग छ । मधेशमा नेतृत्व गर्न हामी आफैंमा सक्षम छौं । तर के छ भने, मुलुकको लोकतनत्र जोगाउनका लागि, सँसदिय व्यवस्था जोगाउनका लागि हामी बिच लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एकता हुन आवस्यक छ । यसमा हामी अगाडी बढ्दैछौं । तथ्य हेरेर हामी जहाँ सक्षम छौं, त्यहाँ सहमति गरेर अगाडी बढ्छौं ।
त्रिकोणात्मक शक्तिको बिचमा सहमति गर्नुपरेको हुँदा संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालबिच एउटा जहमति हुनुपर्छ । प्रदेश नं २ मा, प्रदेश नं ५ मा हाम्रो बहुल क्षेत्रमा एकप्रकारको बुझाई खाँचो छ । त्यसपछि राष्ट्रिय पार्टी नेपाली काँग्रेससँग हामी सहकार्य गर्छौं । नेपाली काँग्रेसले पाउनुपर्ने निर्वाचन क्षेत्र जुन-जुन छ, त्यसमा हामीले दावी गर्न मिल्दैन । यो उहाँहरुले पनि बुझ्नुभएको छ । हामी सहमतीबाट नै अघि बढ्छौं ।
Previousबच्चासहित अन्नपूर्णमा पर्यटक
Next‘वाम गठबन्धनबाट साम्यवाद नभई खतरानाक पूँजीवाद आउने सम्भावना’ : विप्लव
संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव ‘लाजमर्दो’
देशभर १९ लाख १९ हजार २९ सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी !
३१ श्रावण २०७३, सोमबार ०९:०३
३१ श्रावण २०७४, मंगलवार ११:४४